XULASHADA NOOCYADA UGU WANAAGSAN EE DELPHINIUM FOR YOUR SITE - WARSHAD ORNAMENTAL KORAYA
Delphinium waxay magaceeda u keentay qaabka aan caadiga ahayn ee ubaxa kuwaas oo si aan caadi ahayn u ekaa dolphins badan oo wada dabaasha.
Inflorescences, gaaraya illaa laba mitir oo dherer ah, oo leh siyaalo kala duwan, ha ka tagin cid aan indho la'aan ah oo waligeed arkay ubaxyo leh delphiniums.
Ma taqaanaa? Magaca kale ee delphinium waa baaxada.
Waxa ugu wanaagsan in lagu beero ubaxyada hooska, sababtoo ah qorraxda xooggan ubaxyada ayaa sii deyn doonta. Delphinium wuxuu jecel yahay biyaha, laakiin waa inaadan dhaafin, inta lagu jiro muddada ubax hal baaldi hal mar toddobaadkii ayaa ku filan. Sebtembar waxaa loo tixgeliyaa waqtiga ugu fiican ee sanadka si loo beero delphinium.
Guud ahaan waxaa jira in ka badan 450 nooc oo dhirta dilka ah iyo sanadlaha ah. Mid kastaaba wuxuu leeyahay qaabkeeda, muuqaalkiisa iyo midabkiisa. Aynu eegno noocyada kala duwan ee delphiniums ay ku jiraan 10ka sare iyo waxa sharaxaadooda.
Kala duwan tani waxay leedahay caws ubax badan. Laga soo bilaabo fog ubaxyadu waxay u muuqdaan kuwo madow, laakiin haddii aad si dhow u fiirsato isaga, waxay soo baxday in ay leeyihiin midab madow mugdi ah, oo leh xudduud ballaaran oo madow ku wareegsan geesaha.
Kala duwan koox ka mid ah Martha Hybrids. Waxay leedahay ubax madow oo leh madow. Dhirta dhererkoodu gaaro 180 cm oo dhererkeedu yahay 6 sentimitir dhexdhexaad ah.
Duufaannada cufan ee isku dhafka ah (saddex saf oo tufaax ah) ubax lilac-casaan leh indhaha madow.
Wixii koritaanka caadiga ah, ubaxa u baahan yahay badan oo qorraxda iyo nafaqo, carrada qoyan.
Ma taqaanaa? Haddii kale, ubax this waxaa loo yaqaan - "delphinium casaan".
Tani waa noocyo kala duwan oo ka tirsan kooxda Martha Hybrids. Dhirta dhirirka ah 180 cm, dhexroor - 7 sentimitir. Duufaannada cufan ee isku dhafka ah (saddex saf oo dhir ah) ubax. Ubaxyo leh separ buluug ah, laba-midab, leh dabaylaha lilac iyo indhaha madow.
Waa muhiim! Noocani waxay u baahan tahay meel qorrax leh iyo ciid ku filan qoyan.
"Lilac Spiral" waxa kale oo loola jeedaa Beelaha Martha. Noocan ah delphinium wuxuu leeyahay heer aad u sarreeya caabbinta barafka iyo guryaha qurxinta oo aad u fiican.
Delphinium "Lilac Spiral" waa mid aad u sarreeya, wuxuu gaaraa 160-180 sentimitir wuxuuna leeyahay cufan, pyramidal inflorescences, kaas oo ka kooban tiro badan oo ubax ah (qiyaastii 7 sentimitir dhexroor) oo midabyo kala duwan ah.
Isku dhafka nabadda
"Pacific Mix" - koox ka mid ah noocyada soo muuqday ka dib markii shaqada taranta ay sameeyeen Frank Reinelt 1940s. Natiijo ahaan, dhirtu waxay soo saartey dherer, kacsanaan, caleenta afkoda. Ubaxaha tijaabadani waa ballaaran, semi-double, iyo dhexroorka hal ubax waa 7 sentimitir.
Marka la barbardhigo delphiniums kale, miraha noocyadaas ee delphiniums waxay leeyihiin hodan kufilan oo wanaagsan.
Ma taqaanaa? Nolosha noocan ah ee ubaxa kama badna shan sano.
Bellamozum - Tani waa delphinium-ka-dhaqameedka dhaqameedka oo dhererkeedu yahay 100 sentimitir. Delaminium gawaarida leh ayaa leh midab madow, mararka qaarkood midab buluug ah.
Delphinium "Xirmooyinka barafka" - dhirta cad, si aan caadi ahayn oo qurux badan oo qurux badan, indhacad madow gudahood.
Ubaxiisa waa qoyaan iyo soo saaraan caraf udgoon. Dhererka, dhererku wuxuu gaaraa hal mitir iyo badh, kaas oo ku saabsan afartan sentimitir waxaa ku dhegan peduncle.
Waa muhiim! Tani waa noocyo naadir ah oo ubax ah, oo aan ku dhawnahay inaan helno.
Delphinium muddada dheer. Qaar ka mid ah taranta. Dhirta dhirta oo gaadhaysa 180 sentimitir, dhererka inflorescences wuxuu u dhigmaa 90 sentimitir. Inflorescences waa cufan, ubaxyo yar yar oo lilac ah oo ubax leh ileys ah. Dhexdhexaadiyaha ubaxa waa lix sentimitir. Warshad waxaa lagu qiimeeyaa dulqaadka miraayad aad u fiican. Wixii horumarin wanaagsan, dhirta u baahan tahay meel qorrax leh iyo carrada qoyan.
Nidaamka noocan ah ee ubaxu wuxuu gaari karaa 160 cm Cagaarshow, waxaa jira inta badan ilaa 90 ubax waaweyn oo lakac-casaan ah isla waqtigaas. "Subaxii Xagaaga" waxa loola jeedaa Beelaha Martha.
Ubax ee fasalka waa mid aad u caan ah beeralayda ubaxa (kuwani waa noocyo Ruush ah ee delphinium), maadaama ay si fiican u qabsadaan xaaladaha cimilada.
Nooca noocan ah ee delphinium waxaa abuura duurka daloolka, oo ah dhererkoodu yahay 180 sentimitir. Duufaanku waa kuwo ballaaran, oo ah ubax laba jibbaaran oo qaab ah guddi, iyo midabkuna wuxuu noqon karaa mid kala duwan.
Delphinium "Carwo Ammaan ah"- waxaa loo maleynayaa inuu yahay noocyada ugu quruxda badan ee delphinium. In height, warshad this gaadhi kartaa ilaa inta laba mitir! Waxaa intaa dheer, ubaxyada Terry waa casaan cad oo midab leh, u dhiganta koritaanka "Princess", iyo dhexroorkoodu waa 10 sentimitir.
Iyadoo dherer laba mitir oo dhir ah, 60 cm ayaa lagu xisaabiyaa inflorescence.
Waa muhiim! Kala duwanaantan kala duwan ee delphinium waxaa loo tixgeliyaa ugu weyn ee dhamaanba jira.